Izakhamizi zeSunningdale Zisebenzelana leKhansili Enhlelweni Zentuthuko
Nkwenkwezi 27, 2015
Lanxa kuhlezi kulokufuthelana phakathi kukamanisipala lezakhamizi zeHarare, ezemzini weSunningdale zikubone kufanele ukumanyana lekhansili kanye labosomabhizimusi ukuqhuba imisebenzi yentuthuko ngoba sebekuzwisisa ukuba akukho ngenye indlela ngaphandle kokusebenza ndawonye emizameni yokulungisisa inhlupho ezibhekane lazo.
Intathelizindaba zethekelele umuzi weSunningdale ngoLwesithathu, ukuyabona ukuqhutshwa kwemisebenzi yentuthuko le ebalisa ukuqeliswa kwekilinika yakulendawo ngokusebenzelana kwenhlangothi zontathu ezibalisa uzulu, umanisipala kanye labamankampani.
Imisebenzi yentuthuko eSunningdlale iqhutshwa ngokukhokhelwa ngucouncillor Hammy Madzingira esebenzelana lozulu kungelani lokuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
UMayor weHarare umnumzana Benard Manyenyeni uthi umanyano waloluhlobo uphathisa ekuthini uzulu azizwe eqakathekile laye lapho engeniswa kunhlelo zentuthuko yalapho ahlala khona kumenze azibeke umlandu wokuyiqhubekisela phambili.
Lumanyano u Manyenyeni uthi yiwo osulethe ukuqina komkhuba wokuzinikela owe Volunteering, kuzulu weSunningdale.
Bakhona abazinikelayo ukuphathisa ekilinika yalendawo okufana lama nurse aids kanye labongi asebatshiya imisebenzi.
U Sister Mthulisi Menzani, ongu Sister in Charge uyawuncoma lumkhuba wokuzinikela kukazulu we Sunningdale esithi sekubasize kakhulu.
Umnumzana Tapfumanei Mudzungwa ngumgcinisihlalo omela abazali ku School Development Council yesikolo se Sunningdale 2 Council Primary School.
UMudzungwa utshele intathelizindaba ukuba ukusebenzelana lokhu kuphathisa ekuthini akekho ocabangela omunye njengoba yonke into izakwenziwa mgceke.
Okwamanje sebengezelela izakhiwo kulesi sikolo kusetshenziswa imali ehlephunwa kunhlawulo yabazali eya kumfundo yabantwababo.
Kungxoxo le Studio Seven, umkhokheli wenye yenhlanganiso ezisebenzelana lozulu eye Harare Resident Trust, umnumzana Precious Shumba, uncome imisebenzi yentuthuko eqhutshwa eSunningdle.
U Councillor ka ward ten umnumzana Madzingira, uchazwe ngu Shumba njengomuntu osebenza nzima ukuthuthukisa indawo ayimelayo okuyinto athi njengenhlanganiso bayayidumisa.
Ezinye zezinhlelo eziqhutshwa kulomuzi ngokusebenzelana kwalezi nhlangothi zontathu, zibalisa ukuvuselelwa kwendawo yokuzilibazisa yeSunningdale Sunset Park, indawo lapho abantwana abadlalela khona eye Recreationary Centre kanye lokugejwa kwezibhorane ezimbalwa ukuphathisa nxa kudubo lokusilela kwamanzi.
Ukuqheliswa kwe kilinika ebisincinyane, ukwakhiwa kwamanye amakamelo lapho kuzafundela khona abantwana abalungiselela ukuyaqala izifundo zika Grade one, esikolo se Sunningdale 2 Council Primary School kanye lokufundiswa kukazulu phezu kokulondolozwa kwezibi kungenye yemisebenzi eqhutshwa kulomuzi.